Wararkii ugu dambeeyay Duqeyn ka dhacday Jubbada hoose | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Duqeyn ka dhacday Jubbada hoose
J/Hoose (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya, in duqeyn diyaaradeed oo khasaaro geystay ay ka dhacday nawaaxiga degmadaasi.
Diyaarad nooca aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka ayaa fuliyay duqeynta, waxaana la sheegay in duqeynta uu ku dhintay Nabadoon Caanka ahaa degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose.
Al-Shabaab oo maamula degmada Jamaame kana hadlay dhankooda duqeynta ayaa waxaa ay sheegeen in lagu dilay Suldaanka mid ka mid ah Beelaha Soomaaliyeed u qaabilsanaa Jubbooyinka, kaas oo lagu Magacaabi jiray Suldaan Maxamed Cabaas.
Dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka oo inta badan iska kaashada duqeymaha ayaan weli ka hadlin.
Duqeyntan ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli xalay duqeyn lala beegsaday Xarumo Al-Shabaab ku leeyihiin degmada Tiyeegloow ee Gobolka Bakool.
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Duqeyn cirka ah